We.com.mm - ဗိုက်ချပ်ချင်ရင် ဒီ (၆) မျိုး ရှောင်ပါ
ကဲ ဗိုက်ချပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ ဒါလေးတွေတော့ ရှောင်မှ ဖြစ်မှာပါ။ ဘယ်လိုလဲ ? ရှောင်မယ်မဟုတ်လား ?
တစ်နေ့ ဘီယာ ၃ ခွက်သောက်ရင် ရနိုင်မဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ
ကလေး၊ လူကြီး အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ပုဇွန်ဆန်ပြုတ်
နာမကျန်းဖြစ်လာခဲ့ရင် အမြန်သက်သာစေဖို့ စားသင့်တဲ့ အစားအစာ (၅) မျိုး